Ny fialan-tsiny ho an'ny namako sy mpiara-miasa amiko any Chicago | Martech Zone
Talata, Oktobra 2, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manasa anao handray anjara amin'ny Prof. Marketing Konferansa fivarotana B2B nofinofy tanteraka io! Ny famelabelarako dia voalamina tsara ary notehiriziko tao amin'ny Renaissance ny efitranoko. Nisy aza aho Business Cards natao manokana ho an'ny hetsika! Tsy andriko ny nihaona tamin'ny tambajotra virtoaly nitombo tato anatin'ny taona lasa.
Tsy maintsy niasa ny alatsinainy aho ary ny tanjoko dia ny hampiakatra ny alatsinainy hariva ary hiala sasatra ho an'ny fivoriana anio, Mitondra ny bilaogin'ny B2B amin'ny sehatra vaovao.
Ny alatsinainy maraina dia hitako fa reraka be tamin'ny familiana ahy hiasa. Nisy fotoana roa izay heveriko fa nialona tamin'ny jiro mena… tsy tsara. Namokatra ny andro, saingy nisy fanelingelenana nataoko nandritra ny tontolo andro tamin'ny alahelo hafahafa. Rehefa nitondra fiara nody aho dia maitso sy fotsy. Tonga tany an-trano aho ary alina inona izany! Mbola nanantena aho angamba fa zavatra nohaniko fotsiny ary nanapa-kevitra ny hiala amin'ny hotely aho ary hiakatra aorian'ny sasakalina. Tamin'ny 3 maraina anefa dia tsy maintsy nanoratra ireo namako tamin'ity hetsika ity aho ary nampahafantatra azy ireo fa tsy misy fomba hanatanterahako azy.
Tsy afaka diso fanantenana bebe kokoa aho! Ity no 'tsy misy fampisehoana' voalohany ataoko ary voageja aho. Miala tsiny amin'ny ekipa - ny ankamaroan'ny Prof. Marketing. Nanoratra ahy tamim-pitiavana indrindra i Shelley. Josh Hallett, Ann Handley, Deborah Franke, Phil Gomes, Christina Kerley, Alison Sales. Ary diso fanantenana aho fa tsy nandany fotoana nifanakalo hevitra tamin'ny namako, Paul Misy ary Kristian Andersen ihany koa.
Rehefa avy natory adiny 14 teo ho eo aho dia niverina. Heveriko fa handeha eo amin'ny bisikileta eto aho afaka minitra vitsivitsy ary mitaingina adiny iray. Mila vonona amin'ny rahampitso aho - fihaonambem-paritra hafa, WebCamp. Tsy halahelo ny 2 misesy aho!
2 Okt 2007 amin'ny 3:24 PM
Miala tsiny aho fa naheno fa tsy salama ianao! Nivonto ny foko rehefa nijanona teo aho ary nahita ilay endrika maitso kely, natahotra aho sao tsy ho ao amin'ny Web Camp ianao rahampitso. Halako fa tsy nahatratra an'ity fihaonambe ity no nandrasanareo… .Faly anefa aho fa tena salama kokoa ianareo ary ho tonga any WC rahampitso. Ny fotoam-pivoriana dia deraina be foana. Rahampitso indray!
3 Okt 2007 amin'ny 2:18 PM
Miala tsiny fa tsy tafavoaka ianao! Izy io dia heck an'ny tontonana. Tantara, torohevitra ary vazivazy tsara be dia be. Fanindroany izao tamin'ny tontonana Josh-moderated ary nahafinaritra izy.
3 Okt 2007 amin'ny 2:58 PM
Malahelo anao izahay, Doug. Mety ho nahafinaritra ny nihaona taminao sy nandre ny anjaranao.
Manantena ny hahatratra amin'ny fihaonambe iray hafa atsy ho atsy, ary faly mahafantatra fa efa manamboatra ianao!